I-AutoPitch: I-imeyili Automation Yabamele Abathuthukisi Bokuthengisa | Martech Zone
I-AutoPitch: I-imeyili Automation Yabamele Abathuthukisi Bezentengiso
ULwesine, April 12, 2018 ISonto, Ephreli 15, 2018 Douglas Karr
Kunezikhathi eziningi lapho abamele abathengisayo banohlu olukhulu, kepha umzamo odingekayo ukuthumela i-imeyili ngasikhathi sinye uthatha umzamo omkhulu kakhulu. I-AutoPitch ihlangana ngqo ne-imeyili yakho, inika amandla i-templating, bese ibika emuva kunoma yimuphi umsebenzi noma ukubandakanyeka maqondana nalawo ma-imeyili. Ungakwazi nokusetha okulandelanayo okuthunyelwa ohlwini lwakho.
Ukudonsa uhlu lokuhola olubandayo kungxenyekazi ye-imeyili kungathola inkampani enkingeni enkulu nomhlinzeki wayo. I-AutoPitch ikuvumela ukuthi uxhume futhi uthumele ama-imeyili enziwe uqobo ngqo nge-akhawunti yakho yehhovisi.
Ukuphathwa koPhambili - Bona amarekhodi wokuxhumana anemininingwane, futhi ubuke umlando wokuxhumana endaweni eyodwa ukuze ukwazi ukuphatha imikhondo ngaphandle kwenkinga.
Mail ukuhlanganisa - Izici zokuhlanganisa iMeyili zifaka phakathi ukulandelela okuvulekile, ukuchofoza ukulandelela, ukuhlanganisa imeyili ngokwezifiso, ukuhlela, nokuningi.
Izibonisi - Izifanekiso ze-imeyili ezabiwe, zethimba lonke. Akunasidingo sokushintsha kusuka kwesinye isicelo siye kwesinye. Konke endaweni eyodwa!
Ukulandela Okuzenzakalelayo - Khulisa isilinganiso sakho sokuphendula ngama-imeyili wokulandelela azenzakalelayo. Khulisa ukuhola okuningi futhi wandise ukusebenza kahle.
Uhlu Lokucindezela - Faka izizinda nama-imeyili kuhlu lokucindezela, ukuvimbela ukwephulwa kwe-CAN-SPAM.
Imisebenzi - Dala, hlela futhi unikeze imisebenzi ukuze ungalokothi uphuthelwe ukulandela.
Ungasebenzisa futhi i-AutoPitch yethimba lonke kwi-akhawunti eyodwa. I-AutoPitch isebenza ne-Google Apps (Gmail), i-Microsoft Exchange, i-Office 365, noma yimuphi umhlinzeki we-imeyili osuselwa ku-SMTP.
Tags: ukuvula ngokuzenzakalelai-imeyili ezenzakalelayoG SuiteGmailukuhola isizukulwaneihhovisi 365umbonouhlu lwemisebenzi yokuthengisaama-imeyili alandelanayosmtpuhlu lokucindezela
Isimo Somhlaba Sokukhangisa Somdabu Sika-2018 Sigcina Sikhula Sikhulu
Yini i-Mobile Marketing Automation?